DJ Video Loop - Muuqaal Qoto-dheer - NYE Xisaabinta loogu talagalay Djs, Vjs, Nightclubs 2020
Ha dhigin shaashad madow inta lagu guda jiro! Xitaa haddii aadan haysanin fiidiyowga loogu talagalay hees gaar ah, waxaad weli haysan kartaa muuqaalo muuqda si aad u sii wadato socodka. Si ka fiican, ka dhig mid ka mid ah wareegyada Video-ga DJ, loo qaabeeyay magacaaga. Dib-u-hagaajinta astaantaada shakhsi ahaaneed iyo inaad iska ilaaliso in dadku u maleynayaan in go'aadaada la dhammaystiray sababtoo ah shaashadu way xirantahay
Taariikhaha maqalka iyo sariiraha muusikada ayaa la heli karaa fiidiyowgaan, nagala soo xiriir wixii faahfaahin ah.
Daawo Video - Magaca iyo cinwaanka loo qaabeeyey si aad ugu ciyaarto shaashadahaaga VJ marka aadan haysanin fiidiyowga heesaha aad ciyaareyso. Calaamadee calaamaddaada adoo isticmaalaya shaashad madow. Wax walba waa la xaddiday. Looma dhawaaqin. (laakiin codka codka / sariirta muusikada ayaa lagu dari karaa haddii loo baahdo) Djs mihnadeed, goobo lagu caweeyo, makhaayado, hudheelo iyo casinos oo kaliya.